मदन लामिछाने/ममता थापा
गुणस्तरीय बैङ्किङ सेवामा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल नेपाल एसबिआई बैंकले आफ्नो सञ्चालनको २५ वर्ष पूरा गरेको छ । बैङ्कको औपचारिक उद्घाटन २०५० असार २३ (सन् १९९३ जुलाई ७)मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भएको थियो । बैङ्कले काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित कार्यालयबाट आफ्नो बैङ्किङ कारोबार शुरू गरेको थियो । यस बैङ्कमा स्टेट बैङ्क अफ इण्डियाको ५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । बाँकी शेयरमा १५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष र ३० प्रतिशत सर्वसाधारण नेपालीको स्वामित्व छ ।
नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा नेपाल एसबिआई बैंक राम्रो प्रतिफल एवम् न्यून निष्क्रिय कर्जा भएको बैङ्कको रूपमा छ । २०७४ चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको निक्षेप रू. ८३ अर्ब ८४ करोड, कर्जा तथा सापटी रू. ७४ अर्ब ५ करोड र लगानी रू. १८ अर्ब १० करोड पुगेको छ । बैङ्कका नेपालभर ७२ शाखा कार्यालय, ७ एक्सटेन्शन काउण्टर, तीन क्षेत्रीय कार्यालय र कर्पोरेट अफिस छन् । बैङ्ककै सहायक कम्पनीका रूपमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा छ । बैङ्कले नेपालको ३६ जिल्लामा रहेका बैङ्क शाखाहरू तथा १ सय १० एटीएम (दुई मोबाइल एटीएम र चार सीआरएमसहित)बाट आफ्ना ग्राहकलाई बैङ्किङ सेवा पु¥याउनुका साथै इण्टरनेट बैङ्किङ, मोबाइल वालेट, एसएमएस बैङ्किङ, आईआरसीटीसी टिकट बूकिङलगायत अत्याधुनिक सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । स्थापनादेखि नै दिगो एवम् सन्तोषजनक कार्य प्रगाति हासिल गर्न सक्षम वाणिज्य बैङ्कको रूपमा रहेको यस बैङ्कका ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ता छन् ।
यस बैङ्कको प्रमुख संस्थापकको रूपमा रहेको स्टेट बैङ्क अफ इण्डिया, भारतको २ सय वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको बैङ्क हो । सम्पत्ति, निक्षेप, नाफा, शाखा सङ्ख्या, ग्राहक सङ्ख्या एवम् कर्मचारी सङ्ख्याका आधारमा पनि यो बैङ्क भारतकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैङ्कको रूपमा छ । भारतभर यस बैङ्कका २४ हजार शाखा छन् भने संसारभरका ३७ देशमा २ सयभन्दा बढी वैदेशिक कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
सञ्चालनको पहिलो वर्ष रू. ५७.१४ करोड को व्यवसाय गरेको नेपाल एसबिआई बैंकले आफ्नो निरन्तर प्रयासले हाल २५औं वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा रु. १५ हजार करोडको व्यवसाय गर्न सफल भएको छ ।
शुरूका दिनमा आधारभूत बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आएको यस बैङ्कले हाल आएर आफ्ना सेवाहरूलाई व्यापक रूपमा विस्तार एवम् विविधीकरण गरेको छ । आधुनिक डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा पनि यो बैङ्क अग्रणी छ । बैङ्कले पेपरलेस बैङ्किङको अवधारणा अगाडि बढाउँदै काठमाडौंको दरबारमार्गमा नेपाल एसबिआई ‘इनटच आउटलेट’को स्थापना गरेको छ । यस आउटलेटमा रोबोट तथा टचस्क्रिन कम्प्युटर राखिएको छ, जसको सहायताले तत्काल बचत खाता खोेली एटीएम कार्ड दिने, इण्टरनेट बैङ्किङ सुविधा दिने, चेक डिपोजिट गर्ने, नगद जम्मा गर्ने, नगद निकाल्नेलगायत सुविधा ग्राहकले पाउँछन् ।
कुल २२ जना कर्मचारीबाट कारोबार शुरू गरकोे यस बैङ्कले हाल करीब ९ सय कर्मचारीबाट सेवा दिँदै आएको छ । बैङ्कमा कार्यरत कुल कर्मचारीमध्ये करीब २७ प्रतिशत महिला छन् ।
नेपाल एसबिआई बैंक नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने पहिलो बैङ्क मानिन्छ । बैङ्कले एटीएम मेशिन र इण्टरनेट बैङ्किङलगायत ई–कर्नर, नेपाल एसबिआई इनटच आउटलेट र एनएसबिएल पेमेण्ट गेटवे जस्ता प्राविधिक प्रडक्ट पनि बजारमा ल्याएको छ ।
डिजिटल भिलेज अभियान
नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले राजधानीबाट करीब २० किलोमिटर टाढा रहेको शङ्करापुर नगरपालिकाको जहरसिंहपौवा गाउँमा सरल र सुलभ बैङ्किङ सुविधा प्रदान गर्नुका साथै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैङ्कले उक्त गाउँलाई ‘डिजिटल भिलेज’का रूपमा स्थापित गरेको छ । बैङ्कले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम थालेको हो । बैङ्कले जहरसिंहपौवामा शुरू गरेको ‘डिजिटल भिलेज’ अभियान नेपालका लागि नयाँ अवधारणा हो ।
यो अभियानले पहिलो चरणको रूपमा जहरसिंहपौवामा २ हजार २ सय जनसङ्ख्या रहेको ४ सय ५० घरधुरीलाई बैङ्किङ परिधिभित्र ल्याएको छ । यसका लागि बैङ्कले यो क्षेत्रमा प्वाइण्ट अफ सेल, एटीएम, सीडीएम तथा सीआरएम, मोबाइल बैैङ्किङ, इण्टरनेट बैङ्किङ जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । बैङ्कले यो क्षेत्रमा फ्री वाईफाईको सेवा पनि विस्तार गरेको छ भने विपन्न वर्गका मानिसलाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत क्रेडिट लिङ्केज तथा कभरेजको प्रयास गरेको छ । यो क्षेत्रको प्रत्येक घरको बचत खाता खोली एटीएम वितरण, टेक लर्निङ सेण्टरको स्थापना गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्तीको जडान, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा केही चिकित्सा उपकरणको हस्तान्तरणलगायत काम भएका छन् । उक्त क्षेत्रको कालिका शरण विद्यालयलाई पुस्तकालयको व्यवस्था, कक्षा ७ देखि १२ सम्मका छात्राहरूलाई सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन र छात्रालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने स्यानिटरी सामग्री वितरणलगायत सहयोग गरेको छ ।
बैङ्क नयाँ प्रविधि र विज्ञता भित्र्याउन अग्रसर
सुजित कुमार बर्मा
नेपाल एसबिआई बैंक लि.
नेपाल एसबिआई बैंकले आफ्नो सञ्चालनको २५ वर्ष सफलतापूर्वक पूरा गरेकोमा मलाई हर्ष लागेको छ । भारतीय स्टेट बैङ्कसँगको आप्mनो सम्बन्धमार्फत बैङ्किङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र विज्ञता भित्र्याउन पनि यो बैङ्क अग्रणी रहेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको अध्यक्ष भएको नाताले यस बैङ्कले निरन्तर रूपमा नेपाली जनतामा गुणस्तरीय सेवा प्रदन गर्दै आएको बताउन पाउँदा आफूलाई निकै गौरवान्वित ठानेको छु । बैङ्कको रजतजयन्ती समारोहका अवसरमा म लगानीकर्ता, ग्राहकवर्ग, कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई बैङ्कप्रति देखाएको निरन्तर विश्वासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
वित्तिय समावेशीकरण हासिल गर्ने नेपालको बृहत् लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि यो बैङ्क प्रतिबद्ध छ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाल एसबिआई परिवारका तर्फबाट संसारका उत्कृष्ट बैङ्किङ मापदण्ड अवलम्बन गर्न बैङ्कको सञ्चालक समिति निरन्तर रूपमा प्रयासरत रहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । त्यस्तै, बैङ्क आप्नो सञ्चालनका क्रममा ‘हरित अभियान’मार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान दिन समेत प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछु ।
लगानीकर्ता तथा उपभोक्तासमक्ष उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध
प्रबन्ध सञ्चालक एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेपाल एसबिआई बैंकले आफ्नो सञ्चालनको २५औं वर्ष पूरा गरेको अवसरमा म एकदमै हर्षित छु । बैङ्कको प्रबन्ध सञ्चालक एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको नाताले म बैङ्कका संस्थापक, लगानीकर्ता, ग्राहकवर्ग, बैङ्क परिवार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा बैङ्कको सफल सञ्चालन एवम् बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रचलित विश्वस्तरीय बैङ्किङ् अभ्यास अवलम्बन गर्न हामीलाई निरन्तर रूपमा प्राप्त मार्गदर्शन एवम् सहयोगका लागि म हाम्रो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
त्यसैगरी हाम्रो डिजिटल क्षमताको विस्तार तथा जोखीम व्यवस्थापन एवं अनुपालनाका क्षेत्रमा विश्वव्यापी मापदण्ड अवलम्बन गर्न हामीलाई निरन्तर सहयोग एवम् मार्गदर्शन गर्ने हाम्रा संस्थापक भारतीय स्टेट बैङ्कलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी बैङ्कका लागि सहयोगी स्तम्भ सावित भएका हाम्रा संयुक्त लगानीका साझेदार कर्मचारी सञ्चयकोषप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा बैङ्क परिवारको तर्फबाट आगामी दिन पनि लगानीकर्ता तथा उपभोक्तासमक्ष उत्कृष्ट, विश्वस्तरीय एवम् नवीनतम बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । बैङ्कले आफ्नो ‘हरित अभियान’मार्फत यो संसारलाई भावी पुस्ताका लागि उपयुक्त वासस्थान बनाउन सक्दो योगदान गर्न बैङ्क परिवार प्रतिबद्ध छ ।
शाखारहित बैङ्किङको शुरुआत
नेपाल एसबिआई बैंकले रजतजयन्तीको अवसरमा शाखारहित बैङ्किङको सुरुवात गरेको छ । बैङ्कले आफ्नो लक्षित ग्राहकसमक्ष बैङ्किङ पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले शाखारहित बैङ्किङ प्रणालीको शुरुआत गरेको हो । राजधानीमा शनिवार आयोजित आफ्नो २५औं वार्षिकोत्सव समारोहमा कम्पनीले शाखारहित बैङ्किङको शुभारम्भ गरेको जानकारी गराएकोे थियो । यो प्रणालीअन्तर्गत बैङ्कले स्थानीय रिटेल एजेण्ट एवम् प्रविधि प्रयोग गरी तोकिएको केन्द्रहरूमा वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दछ । स्मार्ट ट्याब्लेट, बायोमेट्रिक पोइण्ट अफ सेल्स जस्ता विधुतिय उपकरणहरूको सहायताबाट शाखारहित बैङ्किङको सुविधा लिन सकिने उल्लेख छ, जसमा फिङ्गर (औंठा) प्रिण्ट स्क्यानर र थर्मल प्रिण्टको प्रयोग हुन्छ । यसका लागि ग्राहकहरूलाई नेपाल एसबिआई बैंकको डेबिट कार्डसमेत उपलब्ध गरिन्छ ।
‘परी–२.०’ रोबोट सार्वजनिक
काठमाण्डौंको दरबारमार्ग स्थित इनटच आउटलेटमा परी नामक मानवीय रोबोटद्वारा ग्राहक सेवा दिँदै आएको यस बैङ्कले आफ्नो रजतजयन्तीको उपलक्ष्यमा उक्त रोबोटको दोस्रो संस्करण ‘परी–२’ सार्वजनिक गरेको छ ।
३ ग्रामीण शाखाको रिमोटद्वारा उद्घाटन
बैङ्कले स्थानीय तहमा १५ ग्रामीण शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै गत शनिवार ३ शाखाको उद्घाटन गरेको छ । रजतजयन्ती समारोहको उद्घाटनसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले रिमोटद्वारा उक्त शाखाहरूको उद्घाटन गरेका हुन् । यसअन्तर्गत बैङ्कले दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, सङ्खुवासभाको धर्मदेवी गाउँपालिका र प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकामा आफ्नो शाखा कार्यालय स्थापना गरेको हो ।